Ama-cryptocurrensets emayini nama-Bitcoins asemafini - Yenza izimayini zemali | Izindaba zamagajethi
Imayini ye-Cryptocurrency, thola ukuthi ungayenza kanjani imali yezimayini efwini
UMiguel Gaton | | Criptomonedas, Software, Ubuchwepheshe
Uma unesithakazelo ukutshala izimali futhi awufuni ukuchitha imali ku thenga ama-Bitcoins, Ethereum noma ezinye izimali ngqo, khona-ke inketho engaba nentshisekelo enkulu eyezimayini. I- izimayini ze-idijithali yemali Kuyinqubo esezingeni eliphansi lapho ukuthengiselana kuqinisekiswa khona ku-blockchain; Kepha ukuqonda kangcono ngendlela elula ukuthi iqukethe ini, singasho ukuthi kuyinqubo lapho ikhompiyutha inikezela ngochungechunge lwezinsizakusebenza zekhompyutha bese yona ithola inkokhelo kuma-cryptocurrensets. Uma ufuna ukubona ukuthi ungazimba kanjani izinhlamvu zemali ngendlela enenzuzo futhi kusuka efwini, bese uqhubeka nokufunda le ndatshana.
1 Izimayini ze-Cryptocurrency, umlando omncane
2 Izimayini zefu
3 HashFlare, ama-bitcoins ami emafini
4 Ungayifaka kanjani i-cryptocurrensets kuHashflare?
Izimayini ze-Cryptocurrency, umlando omncane
Eminyakeni edlule kwakungenzeka Imayini iBitcoins noma amanye ama-cryptocurrensets ngendlela elula evela ekhaya nokutshala izinsiza ezimbalwa ezingeni lehadiwe. Noma iyiphi ikhompyutha yayikwazi ukufaka izinhlamvu zemali ngendlela enenzuzo ngakho-ke abanye abantu banquma ukutshala imali emishinini yokumba emakhaya ngendlela engacishe ifane neyabathandi. Njengamanje lokhu akusenzeki, ukuvela kwe- imishini eyenzelwe izimayini ngokukhethekile zemali kanye nobunzima obukhulayo be-algorithm yezimayini kwenza kungabi nzuzo ukumba ngale ndlela namuhla - okungenani ngezimali ezivame kakhulu njengeBitcoin, i-Ether, ... - nokuthi imakethe ilawulwa izinkampani ezinkulu abazinikelayo izinsiza ezinkulu kulo msebenzi.
Futhi asinayo kuphela into enqumayo yezindleko zehadiwe, futhi sineminye imikhawulo efana nale:
El ubunzima obandayo: ubunzima bezimayini iBitcoins benyuka inyanga nenyanga, ngakho-ke kuya ngokuya kudingekile ukuba namandla amaningi wekhompyutha ukuze ukwazi ukumba iBitcoins ngokunenzuzo.
El izindleko zamandla: izinhlamvu zemali zezimayini inqubo esebenzisa ugesi omningi, yingakho izuzisa kakhulu kulawo mazwe anogesi onenzuzo enkulu, njengeChina, i-Iceland, njll.
La izinga lokushisa kwemvelo: amaprosesa akhipha ukushisa okukhulu ngenkathi kufakwa izimayini futhi sidinga ukukuqeda lokho kushisa; ngakho-ke ukumba izimayini emazweni anezimo ezibandayo nakho kunciphisa izindleko.
Ngalezi zizathu - nezinye - namuhla ingxenye enkulu yezimayini ze-cryptocurrency yenziwa emazweni afana neChina, i-Iceland, iFinland, njll.
Njengoba sesivele siphawule, izimayini ze-cryptocurrencies ngqo ezivela ekhaya azenzi nzuzo khona manje. Yebo, empeleni kungaba yinzuzo inqobo nje uma sibheka lawo ma-cryptocurrensets asanda kwenziwa angaziwa kangako futhi asavumela ukumba izimayini kusuka kuzisetshenziswa ezinamandla aphansi, kepha lokho kungenye indaba engingayinikeza enye indatshana ebanzi kakhulu. Kulokhu sikhuluma ngezimayini zama-cryptos amakhulu nokuthi njengamanje ukusuka ekhaya akunakwenzeka.
Ngakho-ke angikwazi ukwenza izimayini ze-Bitcoins ngokumba imali? Impendulo inguyebo, ngenxa yalokho okwaziwa ngokuthi izimayini zefu o izimayini zefu. Umqondo ngukuthi izinkampani ezisanda kuvela zakha izinhlelo ezinkulu zezimayini zemali kanye ne-hardware ekhethekile, ezenza zenze inzuzo, futhi lezi zinkampani zikunikeza ithuba lokuqasha izinsizakalo zabo ukuze ube nemayini yakho ukude. Ngale ndlela ungaba nohlelo lwakho lwezimayini zeBitcoins futhi kuzodingeka ukhokhe imali kuphela, ukugwema ukuphatha imishini ngqo.
Njengamanje kunezinkampani eziningana ezihlinzeka ngalezi zinsizakalo kodwa kufanele uqaphele lapho ukhetha eyodwa ngoba kunezimo ezithile zezinkampani ezibe yinkohliso elandela uhlelo lwephiramidi abakhohlise imali kumakhasimende abo. Thina sincoma uHashflare, okuyinkampani esisebenze kahle iminyaka embalwa efakazela ukuthi iyinkampani ekuyo ungathemba nokuthi yini i- inzuzo ephakeme yezimayini zefu Kusuka emakethe.
HashFlare, ama-bitcoins ami emafini
I-HashFlare Kuyinto a uhlelo lwezimayini zefu Banikela ngohlelo lwezimayini ngemishini efakwe e-Iceland, ethola inzuzo ephezulu ngenxa yezindleko eziphansi zamandla e-Iceland nesimo sezulu sayo esibandayo esivumela ukuthi bonge izindleko eziningi uma kukhulunywa ngokuqeda ukushisa kwemishini yezimayini. Njengamanje bavumela ukumbiwa kwezimayini zeBitcoins, i-Ethereum, iLitecoins neDash.
Ngabe ufuna ukumayini iBitcoins?
Chofoza LAPHA ukumayini Bitcoins
Ungayifaka kanjani i-cryptocurrensets kuHashflare?
Yize kungabonakala kuyinkimbinkimbi, izinhlamvu zemali zezimayini ngeHashflare zilula kakhulu. Kumele ulandele lezi zinyathelo ezilandelayo:
1.- Chofoza lapha bese ubhalisa ku-HashFlare
2.- Uma usungaphakathi kufanele thenga uhlelo lwezimayini. Lapha unama-algorithms amaningi ahlukene wokumba i-cryptocurrency eyodwa noma enye. Ezinye zinenzuzo enkulu kunezinye, kepha sincoma ukuthi wena thenga i-algorithm ye-SHA-256 ne-Bitcoins yami.
3.- Khetha ubuningi ufuna ukutshala ini kumadola. Ungakhipha kusuka ku- $ 1,5 uye kumanani aphezulu ka- $ 15.000. Lapha kuya ngezinsizakusebenza zalowo nalowo nokuthi ufuna ukutshala izimali ezingakanani.
4.- Yenza inkokhelo. Ungakhokha ngamaBitcoins kepha uma ungumsebenzisi ongathuthuki kuma-cryptocurrensets futhi ungakwenza ngqo ngezindlela zendabuko ezinjengokudlulisa ebhange noma ikhadi lesikweletu. Uma usebenzisa ikhadi lesikweletu, kuzofanele uqinisekise inkokhelo ngokuhamba kwesikhathi ngokukhombisa ikhodi efakiwe enkokhisweni yakho ekhadini, ngakho-ke kungathatha izinsuku ezimbalwa.
Futhi-ke, ungaqala ukumba izimayini zeBitcoins futhi thola imali inyanga nenyanga ngaphandle kokwenza noma yini enye.
Kwiphaneli yakho yeHashFlare unolwazi lapho ungabona khona imali etholwa usuku nosuku, isibikezelo semali engenayo sosuku olungu-1, isonto eli-1, inyanga e-1, izinyanga eziyisithupha kanye nonyaka owodwa ukuze ubone ukuthi inzuzo yakho iyinzuzo kangakanani.
Lapho usuthole amaBitcoins ku-akhawunti yakho unga:
Vuselela ngokuzenzakalela kusho ama-bitcoins ekuthengeni amandla amaningi okumba izimayini eHashflare ukuze ukukhula kokutshalwa kwemali kwakho kubonakale.
Dlulisa la maBitcoins esikhwameni sakho semali lapho ungagcina khona noma baguqulele kuma-euro noma kumadola bese usuka lapho uye nawo ebhange lakho.
Njengoba ukwazi ukubona, izimayini ze-cryptocurrensets ezivela efwini kuyinkqubo eqonde ngqo. Ngenxa yamapulatifomu afana neHashflare ungatshala imali kusuka ku- $ 1,5 futhi uqale izimayini ngaphandle kokuthi uthathe izinkinga eziyinkimbinkimbi njengokuthenga imishini ekhethekile, ukusetha izinhlelo, ukufaka i-algorithm yezimayini,… konke lokhu kwenziwa yi-hashflare yakho. Kumele unqume ukuthi uzonikela malini kutshalomali, thenga amandla okumba futhi yilokho kuphela. IHashFlare yiyo ephethe ukwenza inzuzo yakho ibe ngcono kakhulu, ukuqala ukusebenza nabo ukukhumbule lokho kufanele uchofoze lapha.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » General » Software » Imayini ye-Cryptocurrency, thola ukuthi ungayenza kanjani imali yezimayini efwini
UJose Luis Ureña Alexiades kusho
I-athikili engenakuziphendulela. Ukuqagela okungakhiqizi, nangaphezulu ngama-cryptocurrensets opaque kumgcinimafa. Ifanele iMafia kakhulu kunabantu abanomthwalo wemfanelo.
Phendula uJose Luis Ureña Alexiades
Izindaba zamagajethi kusho
Sawubona Jose Luis Ureña Alexiades. Ngiyaxolisa ukuthi awuyithandi le ndatshana, kuyiqiniso ukuthi ama-cryptocurrensets angukutshalwa kwemali okuyingozi futhi yindlela okufanele athathwe ngayo (kwezimayini ubungozi buncane ngoba kusobala ukuthi bukhona futhi). Lokho yebo, asikholelwa ukuthi kuyimakethe yama-mafia; Kungenzeka ukuthi kunezigebengu ezihilelekile kulo mkhakha ngenxa yezinzuzo zokungaziwa ezinikezayo, kepha kukhona nomkhakha ozungeze umhlaba we-blockchain owakhiwe ngabantu abajwayelekile kakhulu. IBlockchain izokwenza isinyathelo kusuka "kwi-inthanethi yolwazi" iye "kwi-inthanethi yenani" futhi uma amandla ayo eqinisekisiwe, kungenzeka ukuthi sibhekene noshintsho oluguqula njengokufika kwe-inthanethi. Ukubingelela nokubonga ngokusifunda
Phendula kugajethi yezindaba
Ohulumeni namabhange bacabanga okufanayo, izintela namakhomishini zivamile futhi bakhona ekusebenzisaneni phakathi kwabo Amabhange noHulumeni ngemuva kweklayenti lebhange elingazi noma elinencazelo yokuthi kungani bakhokhisa amakhomishini amaningi ekudluliseni phakathi kwezimali. I-Cryptocurrency ingenye futhi iyaqhubeka ukusebenza futhi umhlaba awukwazi ukusuka kuyo.
U-Omar Valfre kusho
UJosé udinga ukufunda okwengeziwe
Phendula u-Omar Valfre
U-Oscar Lopez kusho
Ngakho-ke lezi zinkampani, esikhundleni sokuthi zizimbambele zona zona zize zicebe, zikuthengisela izimayini ukuze ucebe? Vele kunjalo. Lokhu kufana nalabo abakuthengisela izifundo / izincwadi ukuze uzithole uceba ukutshala imali emakethe yamasheya i-XD
Phendula u-Oscar López
UMiguel Gaton kusho
Yebo, empeleni bayayigumba imbongolo ngenyanga. Okwenzekayo ukuthi ngaphezu kwezimayini bakunikeza ukuthi uqashe imishini yabo ukuze ukwazi ukumba.
Ngikubona kuyindlela yokwehlukanisa imali abayiholayo, i-% yezimayini nenye i-% yokuqashwa kwemishini.
Phendula uMiguel Gaton
Nginokungabaza okuthile mayelana nengxenyekazi ebengingakucaceli kulesi sihloko. Ungangiphendula? Ngiyabonga:
1.- Amandla owaqashayo, akhiqiza malini? Ngabe ungathola ngaphambi kokuyithenga?
2.- Ngabe kunesidingo sokuba nesikhwama esiku-inthanethi noma esingaxhunyiwe ku-inthanethi ukuze ukwazi ukuhoxisa ama-bitcoins akho?
3.- Yini enconyelwa kakhulu, okungaxhunyiwe ku-inthanethi noma okuku-inthanethi?
1.- Kwiphaneli yeHashflare uqobo ikuvumela ukuthi ulingise lokho okukhiqizayo ngosuku ngamandla ngamunye anenkontileka.
2.- Yebo, udinga ukuthi ube nesikhwama se-bitcoin ukuze ukhiphe okwenziwayo. Uma umayini u-Ether uzodinga isikhwama semali se-Ether.
3.- Ezingeni lokuphepha, okungaxhunyiwe ku-inthanethi kuphephe kakhulu kepha futhi kuyinkimbinkimbi ukuphatha. Ekugcineni, bengizonquma eyodwa noma enye ngokuya ngotshalomali lwakho. Uma uzokwenza utshalomali oluphansi ngicabanga ukuthi okwenyama akukufanele, uma uzotshala imali kakhulu yebo.
Ngiyabonga ngokungiphendula uMiguel.
UJose Gonzalez kusho
Sawubona, ngisanda kufunda i-athikili yakho emayelana nezimayini ze-cryptocurrency efwini naseHashFlare bese ngithenga i-algorithm ye-SHA-256 ne-Bitcoins yami ngize ngikucacise lokho engingacacisi ukuthi yi- $ 1,50 enginakho ekhokha nsuku zonke noma minyaka yonke uma Ngiyayifaka. Ngiyabonga kakhulu jose
Phendula uJose Gonzalez
Izicubu namathambo kuzovuselelwa ngokushesha ngenxa yalokhu kwelashwa okusha
Ungawasusa kanjani wonke ama-akhawunti wakho we-imeyili